TALIYE SHUB oo shaaciyey 'sirta qorshihii' FAHAD ee Koonfur Galbeed (Daawo) - Caasimada Online
Home Warar TALIYE SHUB oo shaaciyey ‘sirta qorshihii’ FAHAD ee Koonfur Galbeed (Daawo)
TALIYE SHUB oo shaaciyey ‘sirta qorshihii’ FAHAD ee Koonfur Galbeed (Daawo)
Baydhabo (Caasimada Online) – Xildhibaan Mahad Cabdiraxmaan Aadan (Taliye Shub) oo ka tirsan xubnaha Golaha Shacabka Soomaaliya, kana soo jeedo Koonfur Galbeed ayaa bannaanka soo dhigay sheeko siyaasadeed oo horey u dhex-maray isaga & Fahad Yaasiin Xaaji Daahir.
Mahad Cabdiraxmaan Aadan oo horey usoo ahaa taliyaha ciidamada Asluubta, marna ka mid ahaa saraakiisha ciidanka Booliska Booliska ee ka howlgala ee Koonfur Galbeed ayaa fashiliyey qorshihii Fahad Yaasiin uu ku wajahay dagaalkii ay Villa Somalia la gashay maamulkii uu horkacayey Shariif Xasan oo ahaa Madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed.
“Hadda ka hor aniga oo inta joogo qaybtaan Baydhabo ayaa ayaa Xamar la’iiga yeeray taliyaha qaybta Booliska markaas joogay ayaa ii yeeray waan tegay shiraan maalintii ku galnay wuxuu igu yiri waa lagu heystaa is furfur N&N ayaa ku heysato madaxtooyaa ku heysato ayuu igu yiri,” ayuu Xildhibaan Mahad Cabdiraxmaan Aadan ku yiri muuqaalkan.
Sidoo kale wuxuu intaasi ku sii daray in kadib uu la kulmay Fahad Yaasiin oo ka socday Madaxtooyada, uuna weydiiyey sababta uu hortaagan yahay in meesha laga saaro Shariif.
“Habeenkii Fahad iigu horreysay ayey aheyd aniga sideyda aan arkabo waxyar haddaan joogay Fahad oo macawiis, go’ shaal ah iyo bakooradoo wata oo lugeynaya ayaa ii yimid ninyahow waxaa kuugu yeernay annaga dowlad goboleedyadii jiray ayaan rabnaa inaan burburino la beddalo dadkan kan agtiina ah ayaana innoogu daran ma rabno,” ayuu yiri Mahad oo ka sheekeynayey kulankii habeenkaas dhex-maray isaga iyo Fahad yaasiin.
Xidlhibaanka ayaa raaciyey “Ninkii aan soo dirno adiga ayuu dacwo kaa keenaa oo wax lagaa wadi la’yahay wax aad ugu dan leedahay ii sheeg? wax kale oo aad weydiineysaan amey jiraan ayaa ku iri?. Dadka aad soo dirteen waan arkay ayaa iri labo iyo saddex ayaan ka magacaabay dadka lasoo diray Ibraahim Yarow waa ka mid Cabdifitaax Geeseyna waa ka mid,”. ayuu markale yiri.
Kadib Maxaa dhacay?
Mahad Cabdiraxmaan Aadan ayaa sheegay in xilligaas uu Fahad Yaasiin la wadaagay in uusan difaaceynin Shariif ama shaqsi gaar ah, balse uu difaacayo Koonfur Galbeed.
“Aniga Shariif ma difaacayo ayaa iri waxaan difaacayaa idin sheegayaa systemka Koonfur Galbeed ay sameysatay ayaa difaacayaa maamulka noo jiro ayaa difaacayaa,” ayuu yiri.
Inkastoo Shariif Xasan Sheekh Aadan uu is casilay xilligaas, ka hor doorashada hoggaanka Koonfur Galbeed ayaa haddane Villa Soomaaliya, waxay ku guuleysatay inay soo saarto C/casiis Lafta Gareen oo haatan ah Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed.
Hadalkan ayaa ku soo aadayo, iyada oo haatan uu mowjado siyaasadeed wajahayo Madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen oo ka mid ah madaxda sida weyn u taageersaneyd Madaxweynihii hore ee dalka, Farmaajo oo looga adkaaday doorashadii dhacday 15-kii May.